SI FUDUD U HELO - Daciifnimada dumarka | Ragga Stylish
Ragga Stylish | | Waqtiyada firaaqada, Lamaanaha iyo Galmada
Ragga oo dhami waxay leeyihiin dhowr qodob oo daciif ah oo naga dhigaya inaan la taahanno farxad, taas oo aan dhammaanteen si fiican u naqaan. Sidee bay noqon kartaa si kale? haweenku waxay leeyihiin dhowr qodob oo daciif ah oo aan maanta si faahfaahsan u ogaan doonno. Iyaga ka mid ah waxaan horeyba kuugu sheegi karnaa inay ka tiro badan yihiin ragga sidaas darteed waa inaan u dhaadhacnaa shaqada si aan u guuleysano haweeney bilow ilaa dhamaad.
Dhegaha, qoorta ama xubinta galmada waa qodobada daciifka ah ee aan wada ognahay, laakiin ugu yaraan waxaa jira nus dersin qodob oo dheeri ah oo ay tahay inaan kormeerno dhow iyo ogaanshaha sida loo daryeelo loona maareeyo si loo khiyaaneeyo oo looga adkaado haweeney kasta.
Halkan waxaan ku tusaynaa 10ka daciif ee dumarka ah:
1 Aagga timaha
2 Aagga qoorta
4 Waswaas em oo garaac em
5 Aagga caloosha iyo caloosha
8 Bawdada gudaha
10 Gobolka futada, barta liidata iyo xaaraan xaalado badan
Timaha, in kasta oo ay u muuqan karto, waa mid ka mid ah qodobada daciifka ah ee haweeney kasta. Haddii aadan waligaa isku dayin, taabashada gabadha saaxiibteed hada, si aad u shukaansato ama haweeneyda ay indhahaagu u yihiin chiribitas, oo waxaad arki doontaa sida ay ugu soo dhaweynayaan.
Dabcan, dooro waqtiga iyo goobta aad sifiican ugu taabato aagga timaha, maxaa yeelay isku mid maahan inaad taabato timahooda markay isboortiga sameynayaan wayna dhididsanyihiin marka aad iskudayeyso inaad kudhowdahay safka ugu dambeeya ee shineemo .
Buugga khayaanada: ...
Sida vampires oo kale, Haddii aan rabno inaan ogaanno barta daciifka ah ee haweeneyda, waa inaan isku tuurnaa qoorteeda, haa, in aan la siinin qaniinyo si uu u helo dhiigga oo dhan, laakiin inuu dhunkado oo ku salaaxo.
Maaha xisaab, laakiin qoorta Badanaa dumarka oo dhan waa mid ka mid ah daciifnimadooda ugu weyn, iyo in nin kasta oo wanaagsan uu ka faa’iideysto isagoon laba jeer ka fikirin.
Mid ka mid ah meelaha daciifka ah ee haween kasta, marka laga reebo xoogaa naadir ah, waa dhegaha aan qaniini karno, nuugi karno ama u salaaxi karno hel haweeney kasta si ay u dhalaasho rajo la'aan.
Sida had iyo jeer, ha noqon xayawaan, taas oo mararka qaar aan badan nahay, oo ka taxaddar dhegaha aan la cuni karin, mana foorarsan karaan ama loola ciyaari karin sida bahalka oo kale.
Waswaas em oo garaac em
Waxay yiraahdaan Mid ka mid ah waxyaabaha ugu soo jiidashada badan ragga waa yeelashada cod fiican oo raaxo leh. Ha ahaato gurigaaga iyo haddii kaleba, ka faa'iideyso fursadda inaad iyaga ula hadasho oo aad naag kasta hoos u dhigtid. Waxay kuguula muuqan kartaa waxoogaa caqli gal ah, laakiin lahadalka codka oo hooseeya, tusaale ahaan dhegta saaxiibkaa ama xaaskaaga, waxay geyn kartaa gabi ahaanba waali
Aagga caloosha iyo caloosha
Ka tagida madaxa, caloosha iyo aagga caloosha waa mid kale oo ka mid ah meelaha daciifka ah ee haweeney kasta, ama ugu yaraan inta badan. Siinta dhunkasho, leefleef ama xitaa qaniinyo yar ayaa u noqon kara wax aad ugu raaxeysan kara lammaanahaaga.
Dabcan, aad u taxaddar, maxaa yeelay caloosha iyo caloosha oo ay u dheer tahay inay tahay daciif waxay noqon kartaa dhib, gaar ahaan cashada ka dib ama waqtiyadaas xun ee haweenku sida caadiga ah la kulmaan bil kasta.
Dhinaca caloosha iyo caloosha gadaashiisa waa dhabarka waana meel cusub oo daciif ku ah dumarka badankood. Duugis wanaagsan, in yar oo dhunkasho ama jug mararka qaarkood ah ayaa dhalaali kara difaac kasta oo haween ah.
Haddii aad rabto talo wanaagsan, kareem yar ama saliid ayaa kaa caawin kara wax badan safarkaaga dhabarka haweeneyda.
Sidee ayey noqon kartaa haddii kale mid ka mid ah qodobada daciifka ah, oo aan la dhihi karin tan ugu daciifka ah haweeney kasta waa siilka, iyo sidoo kale bushimaha dibedda iyo gudahaba. Duugis wanaagsan oo leh farahaaga, afkaaga ama waxkasta oo maskaxdaada ku soo dhaca ayaa noqon kara waxyaabaha ugu muhiimsan kulan kasta ama dib u eegis kasta oo ku saabsan dhammaan qodobbada daciifka ah.
Ip Talo: Ku taabashada aaggan xubintaada taranka sidoo kale aad ayey ugu raaxeysan kartaa naagtaada. Looma baahna in leeyihiin xubin virile aad u weyn inaad ku guuleysato, laakiin haddii aad weli xiiseyneyso inaad xubintaada taranka u kordhiso hab ammaan ah hadda waa suurtagal soo degsashada Master-ka buuga guska adigoo gujinaya halkan
Mar labaad, si aad ah uga taxaddar inaadan galin gunta hoose ee xubinta taranka haddii aadan hubin in haweeneyda ay cagahaaga isu dhiibtay, maxaa yeelay haddii kale haddii aad si fudud u gasho, waxaad ku dambayn kartaa wax aad iyo aad u xun.
Haddii xubinta taranka haweenka uu yahay kan ugu daciifsan dhamaan dhibcaha daciifka ah, salaaxista, laabta, ama dhunkashada bowdyaha gudaha waxay jebin kartaa iska caabin kasta oo haween ah.
Waqtiga aan la shaacinin waa inaan kugula talinno inaad aad u taxaddarto, maxaa yeelay waa qayb aan si fudud lagu heli karin iyo gaar ahaan haddii aadan kalsooni ku qabin haweeneyda.
Ilaa aad dareento wax yar oo karaahiyo ah inaad taabato ama aad nuugto cagaha haweeneyda, tani waxay noqon doontaa mid ka mid ah qodobada daciifka ah ee midkoodnaIn kasta oo ay kuxirantahay daqiiqada iyo xaalada, iyo urta midkasta, in kabadan hal munaasabad hadana waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad udhaqaaqdo.
Khatarta ah inaad culustahay, aad iyo aad u taxaddar, urta dartiis kaliya maahan laakiin maxaa yeelay haddii haweeney ay ku dhacdo shilinta oo aad u suurtagasho inaad hesho, waxaad ku dambeyn kartaa laad fiican oo afkaaga ku jira.
Gobolka futada, barta liidata iyo xaaraan xaalado badan
Khatar, barta ugu dambeysa ee daciifka ah ee aad ku booqan karto haweeneydu waa gobolka dabada, laakiin Aaggan, haddii ay noo oggolaadaan inaannu u soo dhowaanno, waa inaan si taxaddar leh u taxaddarnaa.
Waxoogaa salaaxis ah, xoogaa shumis ah ama taabasho fudud ayaa dhalaali kara haween kasta, laakiin badankood nasiib daro nama ogolaan doonaan inaan ku nimaadno dhowr sentimitir. Haddii aad ka mid tahay kuwa amarka xakamaynta ee aagaggan, isku day inaad tusto gabadhaada waxa ka maqan.
Diyaar ma u tahay inaad sahamiso dhammaan qodobada daciifka ah ee haweeneyda? Haddii gabadhaas sidoo kale la meheriyay, halkan ayaan ku tusaynaa sida loo sasabo naag la qabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Waa maxay dhibcaha daciifka ah ee haweenku?
DANY JOSE dijo
Waxaan jeclaan lahaa inaad ii soo dirtaan hadalo cusub ama faallooyin kale oo ku saabsan dhammaan qodobada jira ee ku jira faallooyinkaan la soo dhigay
Kujawaab DANNY JOSE
william madiina dijo
Sharaxaad wanaagsan oo ku saabsan galmada dhibcaha g
Ku jawaab william medina
Weydii timaha waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qeybaha xasaasiga ah. Hadana hadaad cadeyn karto halka laga bilaabayo inaad amar siiso 10ka qaraabo ama ka yar wey fiicnaan laheyd. Qoraal aad u wanaagsan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar ka ogaado daciifnimadaas, haween ahaan iyo rag ahaanba.
Ku jawaab luiferrero.
Waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar ka ogaado daciifnimadaas, haween ahaan iyo rag ahaanba
Aad ayaan ugu fiicanahay wax walba ugu yaraan qodobadaas aan bixiyay ayaa taabashada la taabanayaa
Waxaan jeclaa inaan wax yar ka ogaado tan
Ujawaab Luis Abelardo
Waxaan dalbaday wax walba, laakiin midkii lugaha nuugo waa la waayey
Waxaan rabay inaan siiyo Anita dameerka… Kadib waxaan xaqiiqsaday inaanan dameer lahayn oo waxaan bilaabay oohin xD.
Macluumaad fiican Waan ka helay si fiican
Oo aad iyo aad u faahfaahsan mahadsanid.
Ka jawaab Hamilcar
Talooyin ku saabsan in gadhku dhaqso u koro